Inhlanzi yolwandle ngegama elihle "uLwandle lwamaLwandle" lubhekisela kwimveliso yokudla. Ukuba usebenzisa iziganeko ze-ichthyological, ngoko kwimeko apho kukho imigangatho engama-40 yeziLwimi zaseMarine. Kule ntlanzi, umzimba unemizimba enemibala, efana namagqabi. Zisasazwa elwandle kwimimandla yasempileni nakwindawo ephantsi komhlaba. Ngokwezigaba zenzululwazi, ulwimi lwaseMarine lukwaseklasini yeentlanzi ezikhanyayo, iqela elinjenge-flounder, intsapho ye-soloids, intsapho yolwandle ityuwa, uhlobo lweelwimi eziqhelekileyo zolwandle. Ezinye izazinzulu zicinga ukuba ulwimi lwaseMarine lungumntu ophezulu, apho iintsapho ezimbini zivelele: i-right side (Soleidae) kunye nekhohlo (ngaseCynoglossidae). "I-Sole" egameni lentsholongwane yale ntlanzi kuthetha "ukuzula" ngesiLatini, ekubeni imifanekiso yeelwimi zaseMarine ifana nesihlangu sodwa. Kwaye okokuqala ulwimi lwaseMarine lwabizwa ngokuba yi-Dover halibut, eyayibizwa ngegama elinye igama lesiNgesi ukuya kwiivenkile zaseLondon. Kwaye kuphela abantu abahlala kwintsikelelo banokutya ukutya kule ntlanzi. Kamva igama loLwimi lwamaLwandle lwasasazeka kwezinye iintlobo zeentlanzi zolu hlobo, ezinobumba obuninzi, obuhlaza. Izandi ezihle kunye ezingavamile kunye nesihloko esifutshane soLwimi lwaseMarine- "Iityuwa zentlanzi", esusela kwiLizwi elithi Sole. Namhlanje siza kuthetha ngeendawo ezifanelekileyo zentlanzi yolwimi lwaseNyanzini.
Ngoko, umlo weentlanzi ulwimi oluselwandle oluthile olubukeka njengeqabunga lomthi. Izikali zalo zibukhali kwicala, apho intlanzi echaphazela khona ulwandle, kukho umbala ogqithiseleyo. Kwiphezu elingaphezulu umbala ubumnyama kwaye akukho bunzima. Ngokuqhelekileyo ekubonakaleni, ngakumbi xa kuthengiswa kwifom efriziwe, i-fillet yoLwimi lwaseLwandle ididekile kunye ne-pangasius. Ukwahlukana, nangona kunjalo, zikhona-iiplati zincinci, intetho yolwimi lwaseMarine iyamnandi, inyama inothando kunye nenani elincinci lamathambo. Xa sithenga ulwimi lwaseMarine, sincoma ukuba ukhethe okutsha okanye okukhenkce (kungabonakali!) Intlanzi. Ngaba kufuneka uzive ukhululekile xa uthintekile. Cinga ngombuso weegill, umbala wabo kufuneka uzaliswe obomvu. Intlanzi entle yeentlanzi ngokukhawuleza, kwaye iphunga lithethi li-fishy and fresh.
Kodwa ukufumana ulwimi olutsha okanye olunamanzi olwandle oluthengiswayo lunzima kakhulu. Nantsi ingongoma. Ukukhutshwa kolwimi lolwandle akulula, iinqanawa zokuloba okanye izikebhe ezinkulu ezifunekayo kule nto. Indawo yokuhlala kuyo i-alfabhethi yelizwekazi, kwiqondo elingaphantsi kwamashumi amabini anesithoba, kwaye ubude yiNxweme yaseVietnam yoLwandle lwaseChina. Ekubeni ulwimi lwaseMaritime lubhekisela kwi-flounder, bahlala belala phantsi. Imveliso yentengiso yale ntlanzi, kuyimfuneko ukusebenzisa izithuthi eziphantsi. Ngamajelo edijithali, ukufika kumawaka angama-30 eetoni ezilwimi zolwandle kubanjwe kulezo ndawo. Kodwa ukuhanjiswa kweetyunithi zentengiso kuhamba kwiindawo ezintsha, ezichongiweyo kunye neetyuwa. Izinketho ezingezizo zoshishino zokubamba ulwimi loLwandle kunye neendawo eziqhelekileyo zokuloba ebusuku ziyakwenzeka, zifikelela ezinzulwini.
Sonke siyakhumbula usuku lweentlanzi ngeveki - ngoLwesine. Kodwa ukuba neentlanzi, ngakumbi iintlanzi zaselwandle, zinokubaluleka ngakumbi kwisondlo sayo. Siyabulela ukubunjwa kwezondlo ezinomsoco kwimpilo, iinzuzo zokuzisebenzisa zivakalelwa ngokukhawuleza.
Yintoni eluncedo kwiintlanzi ezifana nolwimi lwaseMarine? Okokuqala, iipropati ezixhamlayo zikwiprotheni, engekho ngaphantsi kweendleko zeprotheni yenyama. Kodwa kukho inzuzo - ayiqukethe ioli egcweleyo, inobungozi emzimbeni wethu. Kwi-100 g yolwimi lwelwandle lolwandle ngu-18.1 g weeprotheni. Iprotheni yoLwimi lwaseMarine ifakwa lula kwaye ikhawuleza (kwiiyure eziyi-2-3 nje). Isizathu sokuba izazinzulu zibiza izicubu ezithe xaxa zomzimba weentlanzi, zizaliswe ngamanzi ngaphezu kwezilwanyana. Kwaye ukungabikho kwemfuneko engadingekanga ngexesha lokugonywa nawuphi na ugqirha uya kuhlola njengenzuzo ekunondleni kwizifo zesigca esiswini. Ukongezelela, iiprotheyini zentlanzi zizityebi kwiimino acid ezifunekayo, kwaye kufuneka zize kuphela ngokutya. Ezo zi-amino acid - i-methionine, i-tryptophan, i-lysine, eyona nto iluncedo yi-taurine. Inceda ngeengxaki ze-atherosclerotic, ukukhukhumeza, izifo zesimo senhliziyo, i-hypertension. I-Taurine inikeza utshintsho oluqhelekileyo lwe-sodium, i-potassium, i-calcium kunye ne-i-magnesium ions. Ngenxa yomsebenzi wentliziyo, iipropati zeentlanzi zinika amandla okukhusela ukuphuma kwe potassium ukusuka entliziyweni yentliziyo, kwaye oku kukuthintela ukuphazamiseka kwengqondo yomzimba.
Ulwandle lwentlanzi lucebile kwiivithamini, ngokukodwa iqela D, ioli yeentlanzi ibonakala lula ngomzimba wethu. Umgangatho wayo oxabisekileyo awukho nje umxholo we-cholesterol ophantsi, kodwa kunye nokukwazi kweoli yeentlanzi ukulungelelanisa umgangatho wegazi. Ulwimi lwaseMarine nezinto ezimbiwa zizityebi: i-iodine, i-zinc, i-manganese, ithusi, i-phosphorus nabanye. Umxholo obalulekileyo kunye ophezulu wezinto ezilandelwayo. Kwi-100g yefayili yolwimi lwaseMarine iqulethe okwesithathu kwimihla ngemihla yokudla kwe-iodine, i-110% yesidlo esisetyenziselwa i-selenium kunye nemilinganiselo emibini yemihla, eyi-200%, ye-cobalt! Ulwimi lwaseMaritini aluyonto nje kuphela, kodwa neentlanzi eziphantsi kweentlanzi, oko kuthetha ukuba kulungile ukuba nesondlo esondlo nesondlo. Umxholo wekhalori we-100g wefayile yeLwimi lweLwandle i-88 kilocalories kuphela. Ngoku uyazi iimpawu ezixhamlayo zolwimi lweentlanzi zolwandle, indlela le mveliso ebalulekileyo eya kukukhuthaza ngayo ukulungiswa kwezobugcisa.
Iipropathi zokuphilisa ingqolowa
Ukupheka kweJapan yokutya
Isondlo ngexesha loqeqesho lobunzima
Ngaba luncedo kangakanani ama-apricots omisiwe kunye nococeko
Ukuzila ngokukhawuleza: iinzuzo
Agat Mutseniets kunye noPavel Priluchny bagxekwa ngenxa yokuntuleka kwentle, ifoto
ICinnamon kunye neparsley nedill
Ukwakhiwa kunye neendawo eziyingozi ze-mayonnaise
Umkhosi wefilimu kaVenice 2013
Kufuneka ixesha elide kangakanani amanzi amanzi azalwayo
Inkatha kunye nokunakekelwa kwesikhumba se-decollete
Ukuphuhliswa kocwangciso lwentlalo kwisantombazana
Ukuphononongwa kweefilimu "
Ngaba ndifuna ukubonisa loo mntu ukuba uyabodwa